१-ट्रायकोन्टानोल मूल्य, बिक्री - एन-ट्रायकोन्टानोल आपूर्तिकर्ता मेडिसीरावाटेरियल डट कममा खरीद गर्नुहोस्
तरबूज फल फल
पिटर अलेक्ज्याण्डर, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदेश नम्बर: SE806907 पठाइएको छ।
डारेन ब्राउन, जीबी, अर्डर नम्बर: SE806911 पठाइएको छ।
येहुडी बेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदेश नम्बर: SE806942 पठाइएको छ।
जेभियर नायडू, ES, अर्डर संख्या: SE806939 पठाइएको छ।
ट्रेभर राइट, आईटी, अर्डर नम्बर: SE806969 पठाइएको छ।
जेभियर स्कट, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदेश संख्या: SE806949 पठाइएको छ।
Withhe Gino, FR, अर्डर नम्बर: SE806937 पठाइएको छ।
CAS NO .: 593-50-0
आणविक सूत्र: C30H62O
आणविक वजन: 438.81
घनत्व: ०.0.777 g / ml ° ° डिग्री सेल्सियस मा
पग्लिने बिन्दु: 87 189 .360 .° डिग्री सेल्सियस (१,०XNUMX..XNUMX ° एफ; XNUMX XNUMX२..XNUMX के)
विशिष्टता:30% - 95%
रूप:सेतो स्केली क्रिस्टल
यो ईथर, क्लोरोफार्म, मेथिलिन क्लोराइड र तातो बेंजीनमा घुलनशील हुन्छ, चिसो मद्य र बेन्जीनमा अघुलनशील हुन्छ, लगभग पानीमा अघुलनशील।
यो बोटको वृद्धि नियामकहरूले चामल, गहुँ, कपास, सोयाबीन, मकै, ज्वार, उखु, आदिको तुलनात्मक रूपमा ठूलो उत्पादन भएको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसले प्रदूषण-मुक्त बोटको लागि बोट वृद्धि नियामकको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछ।
विवरण 1-Triacontanol CAS 593-50-0 को बारेमा
१-ट्रायकोन्टेनोल प्लान्ट क्युटिकल मोम र मोममा पाइन्छ। १-ट्रायकोन्टानोल धेरै बिरुवाहरूको लागि बृद्धि गर्ने उत्तेजक हो, विशेष गरी गुलाब, जसमा यसले बेसल ब्रेकको संख्या द्रुत रूपमा बढाउँदछ।
कृपया कुनै पनि समयमा यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ १-ट्रायकोन्टानोल.
यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ भने १-ट्रायकोन्टानोल मूल्य, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा हॉटलाइन +86 592 5365887 XNUMX XNUMX XNUMX मा कल गर्नुहोस् वा ईमेल पठाउनुहोस् [ईमेल सुरक्षित].
त्याग: यस वेबसाइटको जानकारी सन्दर्भका लागि मात्र इन्टरनेटबाट आएको हो। कृपया उत्पादनमा संलग्न वास्तविक निर्देशनहरू सन्दर्भ गर्नुहोस् र अन्तिम व्याख्या कम्पनीको स्वामित्वमा छ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् स्वागत
हामी ईमान्दार संसारका सबै मित्रहरु हामीलाई सम्पर्क गर्न को लागी स्वागत छ। अनलाइन जाँच पठाइ सके पछि हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो जवाफ दिनेछौं। यदि तपाईं समयमै कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएन भने कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस्।
हामी व्यापक र व्यावसायिक सेवा प्रदान गरेर ग्राहकहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं, हाम्रा व्यावसायिक साझेदारहरू र उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू, उत्कृष्ट बिक्री पछि सेवाहरू, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू, र द्रुत शिपिंगको लागि ग्राहकहरूको माझ राम्रो प्रतिष्ठाको मजा लिदै।
ग्रीन स्टोन स्विस सह।, लिमिटेड गोदाम र कार्यालय
शंघाई कार्यालय: १168 झोंगगु आरडी, पिंगपु जिल्ला, शंघाई, चीन।
ज़ियामेन कार्यालय: १०106, हौडाइक्सी रोड, ज़ियामेन, चीन।
मोबाइल फोन: +86 189 १ 6515 १ 7632 ०११ १०XNUMX
E-mail:[ईमेल सुरक्षित](१ काम दिन भित्र जवाफ दिनुहोस्)
* तिम्रो इमेल:
व्हाट्सएप / मोबाइल नम्बर (आपतकालिन मात्र):
वाट्सएप / क्यूक्यू / स्काइप / मोब: +86 13696950872 १XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX०XNUMX
वाट्सएप / क्यूक्यू / स्काइप / मोब: +86 17306002753 १XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX०XNUMX
एस्टेला जेen्ग सबै नेतृत्व उत्पादन, ग्राहक सेवा, र मार्केटिंग अपरेशनहरूको लागि जिम्मेवार छ।
वाट्सएप / क्यूक्यू / स्काइप / मोब: +86 13395058294 १XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX०XNUMX
हेलेन वैश्विक बिक्री, सेवा र युरोपेली बजारमा च्यानल विस्तारको लागि जिम्मेवार छन्।
वाट्सएप / क्यूक्यू / स्काइप / मोब: +86 18965162351 १XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX०XNUMX
कस्मेटिक र पोषण उत्पादनहरूका लागि सुरक्षित र दक्ष सामग्री र सूत्रहरू प्रदान गर्दै।
प्राकृतिक र उच्च-गुणवत्ताको कच्चा मालको साथ ग्राहकलाई उत्तम उत्पादन डिजाइन प्रस्तुत गर्दै।
ईमानदारी व्यवसाय विन-विन सहयोग
तपाईं पनि यी उत्पादनहरूमा प्रतिच्छेदन हुन सक्छ।
HPMC K15 ...
PEG-6 अल ...
के तपाईं हाम्रा उत्पादनहरूका बारे बढि जान्न चाहानुहुन्छ?